Donald Trump oo sheegay inuu masaafurinaayo 3-milyan oo Qaxooti somali ku jirto - iftineducation.com
Donald Trump oo sheegay inuu masaafurinaayo 3-milyan oo Qaxooti somali ku jirto
iftineducation.com – Dad badan oo Donald Trump ka sugayey in ballamahiisa uu ka soo baxo ayaa ku farxay ballanqaadka madaxweynaha la doortay uu ku sheegay in 3 Milyan uu dalkaas ka masaafurin doono, darbigana uu dhisi doono.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka dhabeyn doono balan-qaadkiisii ahaa inuu soo musaafirn doono dadka sida sharci darrada ah ku joogo dalka Mareykanka.
Wareysi uu siiyey TV-ga CBS barnaamijka “60M” ayaa madaxweynaha la doortay ee Trump waxa uu hoosta ka xariiqey inuu wadanka ka soo musaafirin doono malaayiin qof oo si sharci darro ah ku joogo wadanka mareykanka.
Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka loo raafoyo ay gaarayaan tiro ahaan 2-3 milyan kuwaas oo sida uu sheegay iney wadanka si sharci darro ay ku joogaan .
Madaxweynaha lo doortay ee Mareykanka ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa in wadanka ka burin doonaa dadka danbiiliyaasha ah iyo ka ganacsda waxyaaba maanka dooriya iyo cid waliba oo si sharci darro ah ku soo gashay dalkaani.
Israel: yahuuda oo rabto masaajidyadda in laga joojiyo aadaanka salaada dhulka falastiin ay xooga ku heysato